QM oo ka hadashay sicir-bararka Somaliland (Warbixin) - BANDHIGA
QM oo ka hadashay sicir-bararka Somaliland (Warbixin)
Qaramada Madoobe ayaa war ka soo saartay sicir-barar xilligaan ka jira suuqyada gobollada Somaliland.
Waxay sheegtay in bishii September ee la soo dhaafay uu fadhiyay qiimaha, inkastoo uu sameeyay kor u kac boqolkiiba toban iyo labo (12%).
Kor u kacan ayaa lagu jaan gooyay halkii uu joogay sicir-bararku shantii sano ee ina soo gudubtay.
Hay’adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan jimciyadda quruumaha ka dhaxeeysaa ee FAO ayaa warbixinta ay soo saartay ku sheegtay in beddalaadda lacagaha qalaad sida dollarka Maraykanka iyo shillinka Somaliland uu deganaa qiimaha bishii September oo uu hoos u dhacay 8%(boqolkiiba siddeed) halka uu joogay 32(boqolkiiba soddon iyo labo).
Waxaa ay ka digtay hay’addu in qiimaah badeecadaha dalka sida dallayga Galleyda cad, masagada cas iyo haruurka casba ay qiimahooda xasilloonaayeen bishii la soo dhaafay ee sanadkaani 2019-ka.
Sicir-bararka ayaa in dhowaana ahba ka jiray suuqyada gobollada Somaliland, taasoo saameyn xooggan ku yeelatay nolosha kumanaan qoysas ah oo nolosha kaga jira heerka hoose marka loo eego xagga dhaqaalaha.
Xukuumadda ayaa dhowr jeer ku celcelisay in ay wax ka qaban doonto arrinta sicir-bararka hayeeshee wali ma jiro wax la taaban karo oo laga qabtay.
By : Zaki Duale
Faahfaahin: Rasaas lala beegsaday guriga madaxa xukuumadda Galmudug
Madaxweyne Deni oo magacaabay masuuliyiin cusub (Akhriso)